Ụlọ ọrụ / akpakanamde
CreateProto na-elekwasị anya na ntinye ụgbọ ala dị ka ọrụ zuru oke nke nyere anyị ohere ịbawanye ihe ọmụma na ahụmịhe anyị na mpaghara a. N'agbanyeghị site na ihe akaebe nke nchepụta echiche na nyocha nke injinịa, ma ọ bụ site na mpụga ọkụ ọkụ na mpụga na prototypes n'ime ime, anyị nwere ike ịkwado na ọkwa niile.
Na-emeri mkpụmkpụ mmepe ngwaahịa na-ebelata oge niile ma mepụta mgbanwe mgbanwe ọkọnọ na ngwa ngwa prototyping na obere olu mmepụta
Lọ ọrụ ụgbọ ala na-agbanwe ngwa ngwa. Dika usoro ulo oru dika ndi na-anya ugbo ala, ndi mmadu na ndi mmadu, ndi mmadu na-acho ime ka ndi mmadu megharia ohuru ma banye ahia ngwa ngwa. Site na ngwa ngwa dijitalụ na-arụ ọrụ na ngwa ngwa na-akpaghị aka na-arụpụta, ndị na-emepụta ihe na ndị injinia nwere ike imebi atụmatụ na ihe ọghọm dị na ya ma mepụta usoro ịnyefe ihe iji meghachi omume nke ọma maka ọkwọ ụgbọ ala na ndị njem maka ụgbọ ala ndị ọzọ ahaziri.
Otito Prototyping na-akwọ ụgbọala Automotive Innovation
Prototyping Accelerates Automotive Development Nzọụkwụ
The akpakanamde ụlọ ọrụ bụ a mgbagwoju na nnukwu ụlọ ọrụ, chere ihu na ahịa nsogbu ọ na-achọ Ugboro imewe iterations na ọhụrụ imewe mmepe. Otú ọ dị, usoro ụgbọ ala na usoro mmepe bụ ogologo oge, yabụ ịsọ ọsọ na ịrụ ọrụ nke ọma bụ akwa ga-enwerịrị ya. Ihe ngosi akpaka na-anọchite anya otu ihe dị mkpa na usoro nkwado n'etiti imepụta ngwaahịa mbụ na arụmọrụ ikpeazụ.
N'ezie, ntinye ụgbọ ala abụghị naanị na-arụ ọrụ dị mkpa n'oge usoro nyocha nke imewe ahụ, kamakwa na-eme ka akụkụ ahụ rụọ ọrụ nke ọma kachasị mma, ma na-enyocha usoro nrụpụta.
Ihe ngosi akpaka bụ akụkụ dị mkpa nke usoro injinia niile nke na-enyere ndị injinia aka ịchọpụta otu esi emepụta ngwaahịa ụgbọ ala ọhụrụ na-amasị ndị na-azụ ahịa, iji kpọtụrụ ndị nketa na ndị ọrụ mmemme ngwa ngwa na nke ọma, na iji gosipụta uru nke imewe. ndị na-etinye ego na ndị ahịa.
N'ikwu eziokwu, imepụta ụdị nrụpụta ụgbọ ala na-agagharị n'ogo dum nke usoro akpaka na mmepe mmepe, gụnyere ihe akaebe nke echiche, nyocha nke ihe atụ CAD dijitalụ, usoro na nyocha arụmọrụ, ọrụ na nyocha injinịa, yana maka imepụta na mmepụta nkwado usoro.
Ntughari echiche nke Automotive na CAD Digital Model
N'oge usoro echiche na usoro 3D CAD, ndị na-emepụta ụgbọ ala na-amata echiche maka ezigbo ihe site na ịmepụta ụdị mbido n'ụdị ụrọ. O nwere ike inye ha ezigbo ihe mgbakwasị ụkwụ n'ọkwa nke echiche. A ga - eji usoro ndị na - emezigharị usoro injinịa mee ihe maka ịlele ihe atụ iji nweta ụdị CAD na iji mepụta atụmatụ ahụ.
Mkparịta ụka a na-aga n'ihu n'etiti imewe na ihe ngosi ụgbọ ala na-emepụta usoro ntụgharị ebe ngwá ọrụ ọ bụla na-ekpughe ohere na nsogbu ọhụụ iji chọpụta ma gụchaa, ma nyere ndị na-emepụta aka ịghọta ahụmịhe onye ọrụ. Nke a na - arụ ọrụ na mpụga - na - ewetara ndị ahịa na ndị nwere oke - yana n’ime - na imekọrịta ihe nke ọma na ndị otu gị, ma ọ bụ na-akpọkọta ha iji kwado echiche ọhụrụ.
Nhazi na njirimara ọrụ maka akụrụngwa
Ozugbo a kwadoro echiche echiche, usoro nhazi nke injinia chọrọ ka a nụchaa nke ọma iji chọpụta ihe ngwaahịa a na-eme na iji mezie nsogbu ọ bụla.
Mgbe ụfọdụ ndị injinia na-arụ ụgbọ ala na-akpọ nke a “ogbo”. N'oge a, ndị injinia ga-emepụta usoro ihe eji arụ ọrụ ụgbọ ala, ma tinye ngwaahịa ndị a na-arụ n'ụgbọala ndị dị ugbu a. Dị ka mmepe nke ụdị dị iche iche na ojiji nke ịnyịnya ibu, a na-ejikarị ihe ngosi maka ụdị nyocha nke oghere akụrụngwa na nchịkọta data arụmọrụ mbụ nke ụgbọala.
Usoro a na-enyere ha aka ịhụ etu ụdị ngwa ọrụ ụgbọ ala ga-esi dabara n'ụgbọ ahụ ma soro akụkụ ndị ọzọ na-emekọ ihe, ma nyere aka nyochaa atụmatụ, akụrụngwa, ike, ndidi, nzukọ, usoro ọrụ na imepụta ihe.
Injinia ule na nkwenye na-eweputa ihe
Tupu ihe akụrụngwa abanye na mmepụta, ndị injinia ga-emepụta ihe nyocha nke injinia dị ala na ihe ndị na-emepụta ihe na -emepụta ngwaahịa ikpeazụ, ma wepụta ngwa ngwa ha ngwa ngwa dịka ule na nzaghachi iji nweta arụmọrụ achọrọ, nkwenye, ule, asambodo. na ihe achọrọ.
Ntughari ugbo ala di nkpa maka nlele nchebe. A na-etinye ụgbọ ala ndị a na-ebu akụkụ ule ahụ site na ọnọdụ dị iche iche wee nọrọ n'ọnọdụ siri ike iji mata nsogbu ọ bụla nwere ike igbochi iji ngwaahịa ahụ ma ọ bụ kpatara nsogbu nchekwa maka ndị ahịa.
Ka ọ dị ugbu a, imepụta ihe mejupụtara obere olu maka ọkwọ ụgbọ ala ọhụrụ na-agba ndị injinia ume ịchọpụta nsogbu nrụpụta yana ikpebi usoro nrụpụta kachasị baa uru.
Kedu Akụrụngwa Na-arụ Ọrụ Kasị Mma maka Ngwa Automotive?
Thermoplastics. Họrọ site na narị otu narị nke thermoplastics gụnyere PEEK, acetal, ma ọ bụ nyefee ihe nke gị. Nọgide na-eme akara na agba agba maka ọrụ ruru eru.
Liquid Silicone Rubber.Enwere ike iji silikone roba ihe ndị dị ka fluorosilicone na-eguzogide mmanụ maka gaskets, akàrà, na tubing. Ngwa anya doro anya silicone roba dịkwa maka lens na ngwa ọkụ.
NaịlọnIhe odide 3D na-arụ ọrụ na ọtụtụ ihe naịlọn dị site na ntanetị laser na Multi Jet Fusion. Ngwongwo ihe jupụtara na iko na iko jupụtara na nylon na-eme ka ihe eji arụ ọrụ rụọ ọrụ mgbe ọ dị mkpa.
Aluminom. Ngwongwo ihe a nile eji eme ihe maka oku di mfe na-enye ike di ike rue oke nwere ike meputa ya ma obu 3D edeputa ya.
Kedu ihe kpatara MepụtaProto maka Development Automotive?
Gbanwee ihe ize ndụ imewe site na ngwa ngwa na ịkọpụta ihe eji emepụta ihe na-enweghị ịchụ ọsọ ọsọ.
Tụkwasịnụ Chain mgbanwe
Nweta nkwado a na-achọ maka nsogbu mberede, akụkụ na-echeta, ma ọ bụ ọgba aghara ndị ọzọ na-eweta na osisi mmepụta gị site na iji ntinye akpaaka, ngwa ngwa ngwa ngwa, na akụkụ mmepụta obere olu.
Nyochaa akụkụ geometry dị iche iche na ọtụtụ nhọrọ ederede dị mma. Nnyocha dijitalụ, PPAP, na akụkọ FAI dị.
Mejuputa atumatu obere olu iji mee ka ihe di iche-iche di iche-iche edeputara nke ndi nke ugbua.
Ngwá ọrụ na ndozi
Melite n'ichepụta Filiks ike ukwuu na akpaaka na streamlined akụrụngwa nzukọ na omenala fixturing.
Mepụta Tekinoloji Ntugharị Na-ahụ Maka otlọ Ọrụ Na Niile Na Usoro Gị
N'ihe kariri 10 afọ nke injinia na nnwale nnabata, CreateProto na-eme nke ọma n'ịrụ ọrụ nyocha nke teknụzụ maka injinia ụdị injinịa. Anyị na-agbasi mbọ ike ịbụ ezigbo ọrụ mmepe ngwaahịa gị kachasị mma na ụlọ ọrụ ụgbọ ala. Anyị ipuiche a dịgasị iche iche nke akpakanamde prototyping nmepe na ngwa ngwa n'ichepụta teknụzụ, na-enye CNC machining, 3D obibi akwụkwọ, agụụ mgbatị, ngwa ngwa aluminum tooling, ala olu injection ịkpụzi, na mpempe akwụkwọ metal nhazi, nke ịnọgide na-enwe a asọmpi onu na otutu ọrụ na nkà dị ukwuu-arụ ọrụ ego . Anyị ga - arụkọ ọrụ ọnụ - yana gị - na usoro ọ bụla nke usoro eji arụ ọrụ na mmepe.
Site na ịkwa emo nke ime ụlọ nke gụnyere dashboards, consoles, oghere ụzọ na ogidi na mputa na mpempe akwụkwọ dị ka mpempe akwụkwọ, grilles, nnukwu ọkụ na ọkụ ọkụ na-acha ọkụ ọkụ, ndị otu anyị na-atụkwasị obi na pọtụfoliyo ya dị elu, ma na-agwakọta ha na arụmọrụ arụmọrụ. aka nka, na ima-omimi miri emi iji kwado na ọkwa niile maka ụlọ ọrụ akpaaka.
Akụ anyị kachasị nwere bụ isi ahịa anyị nke toro n'ike n'ike site n'okwu ọnụ ndị ahịa gburugburu ụwa. Anyị bụ ndị mpako na-asọpụrụ inye keukwu prototype n'ichepụta ihe ngwọta maka ụfọdụ nke ụwa na-eduga akpakanamde Nsukka na tier otu suppliers, dị ka BMW, Bentley, Volkswagen, Audi na Skoda. Ebumnuche anyị bụ gafere atụmanya ndị ahịa ma nyere ha aka ịga nke ọma n'ọma ahịa.
AKW AKWỌ AKW AKWỌ AKWOMKWỌ
Ike anyị na-arụpụta dijitalụ na-eme ka mmepe nke ngwa ngwa igwe na plastik megharịa ngwa ngwa. Fewfọdụ n'ime ngwa ngwa ụgbọ ala gụnyere:
Mgbakọ usoro ihe ndozi
Plastic gbaara mmiri
Akụkụ azụ ahịa
Anya m na atụmatụ ọkụ
Nkwado maka on-osisi n'ji ngwá electronic
- Ndị na-eme ihe ọutomụ :ụ: ụbọchị ndị a chọrọ atụmatụ ndị ọzọ ka ha banye na obere ngwugwu. Nke ahụ bụ ihe ịma aka anyị, na-etinye ọrụ niile ahụ n'ime obere ngwugwu ahụ.
JASON SMITH, DESIGNER, NKWUKWU TRBỌD B AH GR GROUP
CNC Prototyping, Otito Prototyping na Manufacturing, Ọrụ 3d Printing & Rapid Prototyping Services, Fast Prototyping, CNC Rapid Prototyping, Otito Prototyping,